#Ilkay Gundogan ayaa ka hadlay mustaqbalkiisa Manchester City iyo qandaraaska cusub | Get Latest News From Horn of Africa |
#Ilkay Gundogan ayaa ka hadlay mustaqbalkiisa Manchester City iyo qandaraaska cusub
Ilkay Gundogan ayaa waxaa u furan inuu qandaraaska u kordhiyo kooxdiisa Manchester City, laakiin wuxuu sheegay inaysan wax go’aan ah usan gaarin, mustaqbalkiisana wali ma cada.28 jirkaan ayaa qaab ciyaareedkiisa ugu fiicnaa tan iyo markii uu yimid Etihad Stadium xilli ciyaareedkan, waxaana uu ku riyaaqayaa kooxda Pep Guardiola, waxaana tababaraha City uu jeclaan lahaa inuu xiddiga reer Jarmal uu sii joogo inta uu ka harsan yahay qandaraaskiisa haatan.
Qandaraaska Gundogan wuxuu dhacayaa June 2020, taasoo la micno ah inuu soo gabagabeyn doono xilli ciyaareedka 12ka bilood ee ugu dambeysa, waxaana jira warar xan ah oo sheegaya in kooxdiisii ​​hore ee Borussia Dortmund ay isha ku hayaan xaaladiisa.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa ka hadlay mustaqbalkiisa wareysi uu la yeeshay SPORT BILD waxaana uu sheegay inuu mustaqbalkiisa ka fiirsan doono si taxadar leh.
“Waxay noqon kartaa in qandaraaskeyga xiga uu yahay midkeygii ugu dambeeyay, sidaas darteed go’aankaas waa in si fiican loo fekero,” ayuu yiri Gundogan.
“Waxaan horey u laheyn hal ama labo wadahadal, ma dareemayo wax cadaadis ah arrintaas. Waxa suurtagal ah in aan tago sannadkii ugu dambeeyay ee qandaraaskeyga oo aan kordhiyo.
“Kubada cagta, aad ayaan ugu qanacsanahay City, waxaana jira shaqooyin soo jiidasho leh oo Yurub ah. Marka la eego xushmadda, wax khilaaf ah kama haysto [heshiiska]. Hase yeeshee, wax waliba weli lama go’aansan. ”
Ilkay ayaa dhaliyay 5 gool waxaana uu caawiyay labo gool uu u dhaliyay 13 kulan oo Premier League ah xilli ciyaareedkan, horaantii xilli ciyaareedkii ugu fiicnaa ee gool dhalinta ee City isagoo waqti dheer ku daray.
Dhanka kale Ilkay Gundogan ayaa fikradiisa ka dhiibtay kulamada Champions league ee ay iskaga hor iman doonaan kooxda ay Premier league ku xifiltamaan ee Liverpool iyo kooxda daliisa Germany ee Bayern Munich.
Ilkay Gundogan ayaa aqoon fiican u leh kooxaha Bayern Munich iyo Liverpool oo uu midkastaba kaga hor yimid horyaalada Germany iyo England. Ilkay Gundogan ayaa Bayern Munich la soo tacaalayay toba sanadood oo uu ku soo qaatay kooxaha Jarmalka ee FC Nurnberg iyo Borussia Dortmund halka uu Liverpool kula xifiltamayo koobka premier league.
Ilkay Gundogan ayaa aaminsan in Liverpool ay tahay koox ugu cad cad ee soo dhaafi karta Bayern Munich wuxuuna shuruud ku xidhay suurtogalnimada ay Bayern Munich ugu soo bixi karto wareega siddeed dhamaadka Champions League.
Ilkay Gundogan ayaa sheegay in haddii ay Bayern Munich soo badbaado kulanka Anfield in ay awood u leeyihiin in ay guul ku gaadhi karaan Allianz Arena kooxda ay doonaan ha la ciyaaraane balse waxa uu walaac ka muujiyay Liverpool.
Ilkay Gundogan oo u waramayay wargayska dalkiisa Germany ee Bild ayaa isaga oo ka jawaabay midka Liverpool iyo Bayern Munich ugu cad cad waxa uu yidhi: “Anigu waxaan ogahay sida ay u adag tahay in Liverpool lala ciyaaraa. Sidaa daraadeed, daacad ahaantii waxaan Liverpool u arkaa in ay ka yara horayso Bayern”.
Ilkay Gundogan ayaa si daacad ah u qiimeeyay waxa ay Liverpool kooxaha ugu samayn karto kulamada Anfield wuxuuna yidhi: ” Waxaad dab ka shidi kartaa Anfield, 15ka daqiiqo ee ugu horeeya ayaa saddex gool lagaaga dhalin karaa”.
Ugu danbayn Ilkay Gundogan ayaa ka hadlay sida kaliya ee ay Bayern Munich ku reebi karto Liverpool ee ay ku soo bixi karaan wuxuuna yidhi: “Haddii ay Bayern ku soo badbaado Liverpool, waxay awoodi doonaan in ay koox kasta guriga ku garaaci karaan”.